Mpifaninana ho solontenan’ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin’ny filankevipitantanana GV 2020: Tanya Lokot · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2020 15:35 GMT
Tanya Lokot teratany Okrainiàna, ary GV-er monina ao Irlandy mandalina ny resaka zo nomerika, ny fikatrohana ary ny fitantanana ny aterineto. Mpanao gazety teo aloha, nanjohy ny GV nanomboka ny taona 2013, voalohany indrindra tamin'ny maha-mpandray anjara an-tsitrapo, avy eo nandray anjara tamin'ny maha-tonian'ny famoahana ny RuNet Echo (hatramin'ny 2016). Nandray anjara tamin'ireo tetikasa hafa tato amin'ny GV ihany koa izy, toy ny Advox sy ny GV-Ex. Mpikambana amperinasa ao amin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina GV. Mahay ny tenimpirenena Okrainiàna, Rosiàna, Anglisy, Frantsay (eo ho eo ihany) i Tanya. Ny fahalinany ankoatra ny GV sy ny aterineto dia ny tononkalo, ny fanaovana mofo, ny hanitra ary ireo tanandehibe.